Ukukhangisa Amatende Factory | I-China Ukukhangisa Amatende Abakhiqizi nabahlinzeki
Itende lombhede, elibizwa nangokuthi imarquee ne-gazebo, iyithuluzi lokuphromotha elisetshenziswa kabanzi. Okufaka usayizi omkhulu wokuphrinta nemidwebo yangokwezifiso, ukukhangisa kwamatende amathebhu kuyindlela ephumelela kunazo zonke yokwenza ukuthi ugqame esixukwini, noma ngabe kusetshenziselwa imicimbi yasendlini nemisebenzi yangaphandle, njengemibukiso yezohwebo, amaqembu, imicimbi yezemidlalo noma imicimbi yezentengiso yangaphandle.
Ifakwe ifreyimu yetende esezingeni eliphakeme, amatende wethu wokukhangisa angaqinisekisa ukuzinza noma kwesinye isimo sezulu esincane esinomoya. Iphelele kuzo zonke izinhlobo zokusetshenziswa kwangaphakathi nangaphandle, noma ngabe ngumbukiso wezokuhweba, umbukiso, umcimbi wezemidlalo noma ukwethulwa okusha komkhiqizo. Ngaphandle kwalokho, isikhwama samasondo esenzelwe ngokukhethekile senza ikiti yetende ibe lula ukuhamba ngayo.